Sad Sad Story ! Again | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » Sad Sad Story ! Again
Sad Sad Story ! Again
Posted by ကထူးဆန်း on Feb 3, 2012 in News, Travel | 14 comments
ပထမ တစ်ခါဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ။ကံကောင်းလို့ မသေခဲ့ပါဘူး ။ အခု ဒုတိယ တစ်ခါမှာတော့ …..
I’ve finished my med school years ago, spent years in rural area in Thailand atadistrict hospital helping the poor and underprivileged. The experience from those days are priceless and all rushed into my head at my crucial time.
Morning of Jan2, 2012 after watching sunrise together at Shwesandaw pagoda, we took few hours break for breakfast and shower at our hotel, Aureum Palace Hotel, one of the most luxurious hotel in Myanmar. I still had 20 minutes left till meeting time after shower and breakfast so I tookanap. My sister shouted from the phone in hotel. “Sis wake up! Mama had electrocution from shower”. We shouted to our young bro who was still in the shower and ran fastest in our lives from our Deluxe room to Lotus Villa which is halfamile away. I wished it wasaminor injury but picture of my dad doing CPR to my mom brought me back to reality. I checked her vital signs just to learn that she’s arrested for big while already.
My dad told the story with shaky voice. He heard my mom screaming from the shower room. He thought she was falling cause the floor was slippery. Unfortunately, when he tried to help her he got electric shock through his hand when he tried to remove the shower head from my mom’s hand. Telling the story he showed meablistering burning wound on his right hand.
My sister and I continued CPR while my younger brother who arrived few minutes later tried to contact medical helicopter from Thailand to pick us up. Hotel officers informed that doctor is on the way. She walked in with nothing significant butastethoscope and useless stuff for this situation. We needadefibrillator. We need so many other things. I yelled, we needawell-equiped ambulance. There’s no such thing there. We were transferred to hospital withavan provided by hotel. I asked hotel to call the hospital that we are getting there and be prepared. We continued CPR along the 15-min drive to hospital.
My heart was broken in to pieces when I realized how under standard the hospital was. The only hospital in 500 kilometers distance, has no EKG monitoring. No cardiac board. My instinct made me order IV, adrenaline and started intubation.
Afterawhile I realized nobody cares to CPR except our family, they said my mom was dead before arrival. Other than our local tour leader andadoctor, nobody speaks English. It took meawhile to beg for help from the doctor as they wanted to stop resuscitation.
1. Re: Lethal Electrocution in Bagan. True story?
Feb 03, 2012, 9:53 AM
ပထမ တစ်ခါတုန်းကလည်း ဒီမှာ တင်ခဲ့ဘူးပါတယ် …
ဆိုတော့ ဘယ်မှာလည်း safety , ဘာ ဖြစ်လို့ အသံမထွက်ခဲ့တာလည်း ၊ ဦးတေဇပိုင်မို့လို့လား ? ကျွန်တော် သိခဲ့တာ သာမာန် ရေချိုးခန်းထဲမှာ ချော်လဲတာပါ ။ဂျာနယ်တွေ ပါခဲ့လား မပါလား သတိမထားမိခဲ့ဘူး ။ ဖြစ်တုန်းက သိလိုက်ပေမဲ့ ချော်လဲတယ်လို့ဘဲ သိခဲ့တာ။ အခု တစ်ကယ်ဖြစ်တာတော့ ပထမ တစ်ခါဖြစ်သလိုဘဲ ရေပူကနေ ဓါတ်လိုက်ခဲ့တာပါ။ အခု ဒုတိယ အကြီမ် ထပ်ဖြစ်ရာမှာ သေခဲ့ပါတယ် ။ ပုဂံ Aureum မှာပါ….
ဟိုတယ်ခန်းအတွက်ရေပူကို single unit water heater သုံးထားလို့ ဓါတ်လိုက်တယ်ပေါ့ …။
ရေပူကို overhead tank ကပဲ ရေပူလိုင်းနဲ့လာရမှာမဟုတ်လား။
ဒီလို ဖြစ်ကတတ်ဆန်းလုပ်လို့တော့ နာမည်ပျက်ပြီးရင်းပျက်နေဦးမှာပဲ …။
အစကတည်းက ဘယ်နေရာမှာမှ နာမည်ကောင်းမရ ရတဲ့အထဲမှာနော်…။
ကို htoosan ရဲ့ မြန်မာ လိုပြန်ပေးလိုက်ပါလား ။
အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် ရွာသူား အများစုကြီးက ဖတ်မယ် မထင်ဘူး ။
ဆရာဝန် တစ်ယောက်က ရှင်းပြတော့ ပိုကောင်းတာပေါ့ ။
ဦးတေဇ ပိုင်တဲ့ Aureum Palace Hotel ရဲ့ Lotus Villa အခန်းတွေဟာ
အတော်ကို ဈေးကြီးတဲ့အတွက် ( 415 US$ / day )
တည်းတဲ့သူတွေဟာ တကယ့် သူဋ္ဌေးတွေသာဖြစ်မယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်း ။
မျက်နှာ အကြီးအကျယ် ပျက်ရပြီပေါ့ ။
ဒီလောက် တနေ့တည်းခ ဒေါ်လာ လေးရာ ယူထားတာတောင်မှ ၊
ရေပူ စံနစ် ကို Centralized စံနစ် မသုံးပဲ ၊
ခွက်ကျပြီး Local တခန်းချင်း Water Heater သုံးလို့ ၊
ဓါတ်လိုက်ပြီး သေရတဲ့ အကြောင်း ။
ထိုင်းနိုင်ငံက ဆေးဖက်ဆိုင်ရာ အသက်ကယ် ဟယ်လီကော်ပတာ
မြန်မာ အစိုးရဆီကို ၂၄ နာရီကြိုတင်ပြီး ကွင်းဆင်းခွင့် မတင်ထားလို့
ကွင်းဆင်းခွင့် မရတာတွေ ။
အော် ဓါတ်မလိုက်မှီ ၊ Accident မဖြစ်မှီ ၂၄ နာရီကြိုတင်ပြီး အကြောင်းကြားပေးရမယ်ပေါ့ ။
ကောင်းလိုက်တဲ့ ကြိုးနီ စံနစ်လေးတွေ ။
လူနာရှင်ရဲ့ သမီး ( ဆရာဝန်မ ) က
မြန်မာ ဆရာဝန် နှင့် Ambulance မလာခင်မှာ ကိုပဲ
ယိုးဒယားက ဆေးဖက်ဆိုင်ရာ အသက်ကယ် ဟယ်လီကော်ပတာ ကို
ဖုန်းဆက်ပြီး လှမ်းခေါ်တဲ့ အကြောင်း ။
မြန်မာ့ ဆေးကုသမှု စံနစ်ကြီးကို နိုင်ငံတကာက အထင်အမြင် ကြီးမကြီးကို
ကွက်ကွက် ကွင်းကွင်းကို ပြလိုက်တာပဲ ။
ဂုဏ်သိက္ခာဆိုတာ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် အချင်းချင်း
အပြန်အလှန် မညံ့ဖူးကွ လို့ပြောနေရုံနှင့် ရှိလာတာမဟုတ်ပဲ ။
ဘေး လူ / နိုင်ငံတကာ က အသိအမှတ်ပြု လက်ခံမှ တကယ် ဂုဏ်သိက္ခာ ရှိတာလေ ။
သူတို့နိုင်ငံတွေမှာ လူတိုင်းလောက်နီးနီး CPR အသက်ကယ် ရှုသွင်းမှု
လုပ်နိုင် ၊ လုပ်တတ်တယ် ဆိုတာလေးလည်း ၊ သတိပြုမိပါတယ် ။
တကယ်လည်း ဆရာဝန် ၊ သူနာတင်ကား ၊ ဆေးရုံ သုံးခုလုံးမှာ ၊
အဓိကကျတဲ့ defibrillator လျှပ်စစ် နုလုံး နှိုးစက် မရှိတဲ့ အကြောင်း ။
လူနာရှင်ရဲ့ သမီး ( ဆရာဝန်မလေး ) က မြန်မာနိုင်ငံရဲ့
Sub-Standard / Under-Standard ဆေးရုံကို မြင်လိုက်ရတဲ့ အခါ
( ငါ့ အမေ ကိုတော့ ပြစ်လိုက်ရဖို့ သေချာသွားပါပြီ ဆိုပြီး )
ရင်ကွဲ ဝမ်းနည်း သွားတဲ့ အကြောင်း ။
ဟီဟိ ၊ အဘ ရေးတာတင် တော်တော် စုံနေပြီ ။
ရွာထဲမှာ သတ်ပုံအသင်းရှိတာ စာလုံးပေါင်းတွေ တော်တော်မှန်လာတယ်။ လိုနေတဲ့ဘာသာပြန်အသင်းကြီးအတွက်တော့ အဘဖောနဲ့ ကိုဆန်နီ ဆရာမကြီး TTNU တို့ ဦးဆောင်ပြီးဘာသာပြန်အသင်းကြီး ဖွဲ့ကြရင်ကောင်းမယ်နော်။
ပေးလိုက်ရတဲ့ ပိုက်ဆံနဲ့ တန်တဲ့ ၀န်ဆောင်မှုမျိုးမရလို့ ဒီလို အဖြစ်တွေ ဖြစ်ရတာ …
ဒါတွေလည်း ဖြစ်ရော .. နောက်ဆက်တွဲ ဆင့်ကဲ …..တွေပါ ပါလာရင်း …… ဘယ်နေရာတွေ အားနည်းနေတယ်ဆိုတာ ထင်သာ မြင်သာ ရှိလာကြတယ် … ။တကိုယ်ကောင်းစိတ်တွေ … ပြုပြင်သင့်ပါပြီ ။
တေဇကဒီမှာမနေတော့ဘူး။ စလုံးမှာဆိုလား။ သူကဘာမှလှည့်မကြည့်တော့ဘူး။ သူ့စီးပွားတွေကို။ သူ့ဟာသူအေးရာအေးကြောင်းအရက်သောက်ပြီးကာစီနိုသွားနေကြောင်းသိရပါတယ်။
မြန်မာလို အပြည့်အစုံလေး မရေးပေးနိုင်တောင် အကျဉ်းချုပ်လောက်တော့ ရေးပေးမှ စိတ်ဝင်တစား လာဆွေးနွေးပေးကြမှာ
အခုလိုဖြစ်လာတဲ့အခါ ငတေတို့ စီးပွါးထိခုက်တဲ့အပြင် နိုင်ငံလဲ သိက္ခာကျပါတယ်ဗျာ
ငတေတို့ ရေ နင်တို့ လုပ်ပုံတွေ ဘယ်တော့မှ ဟုတ်ကြမှာတုန်းလို့ ပဲ မေးချင်ပါတယ်
ှHotel တွေမှာ နိုင်ငံခြားက အထပ်မြင့်တွေလို၊ Sedona ၊ Traders ၊ တို့လို မှာသာ central system သုံးမှာပါ ။ နောက် ပိုက်ပိုက်လည်း တတ်နိုင်မှကိုး။ အဲ့ဒီဟိုတယ်ကြီးတွေမှာက ဘွိုင်လာ နဲ့ ရေနွေးငွေ့ထုတ် ပြီး အပူပေး ၊ ရေပူကို circulation လုပ်ထား ဆိုတော့ Aureum လို Bungalow တွေမှာ မသုံးနိုင်ပါဘူး ။ တစ်လုံးနဲ့ တစ်လုံး ကွာဝေးတော့ Heat losess များမှာဆိုတော့ရယ် ၊ အကုန်အကျမခံနိုင်တာရယ် ပေါင်းတော့ မြန်မာပြည်က ဟိုတယ် အများစုက stand alone , electric water heater တွေဘဲ သုံးရပါတယ် ။
မြန်မာ လို ပြန်ဖို့က ကျွန်တော် မှားပြန်မိမှာ စိုးလို့ ပါ။ အဲ့ဒီ့လောက် အရည်အချင်းမရှိပါဘူး …
လူ့ဘ၀ဆိုတာ အရေးကြီတဲ့လမ်းဆုံလမ်းခွကို ရောက်နေသလိုပါပဲ။ လမ်းရွေးမှန်ရင်မှန်သလို ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေ ရတတ်ပါတယ်။
Defibrillator တွေ ရှိသင့်မှန်းတောင် မသိတဲ့ ဘ၀တွေပါ။
အရေးပေါ် အသက်ကယ် စနစ်တွေကို လူတိုင်းတတ်အောင် သင်ပေးဖို့ဝေးလို့ ဆရာဝန်တိုင်း သူနာပြုတိုင်းတောင် မတတ်ပါဘူး၊တတ်ပြီးရင်လည်း မမေ့အောင် လေ့ကျင့်ပေးနေရပါမယ်။
အရင်က ကြက်ခြေနီသင်တန်းကို အလယ်တန်း အထက်တန်းတွေမှာ သင်ပေးကြပါတယ်။
ဘာလို့ ပျောက်ကုန်တာလဲ နားမလည်ပါ။
ဒေါက်တာနေ၀င်းမောင်လို အသက်ဆုံးရတာမျိုးတွေက ထင်ရှားတဲ့သူမို့လို့ သိလိုက်ကြတာပါ။
လူမသိသူမသိလေးတွေ ကျတော့ ကံကိုသာ ယိုးမယ်ဖွဲ့နေကြရတာပဲ။
အာဖရိကတောထဲမှာ မြင်းကျားအုပ်ကြီးထဲက မြင်းကျားတစ်ကောင်ကို ခြင်္သေ့ဆွဲစားသွားတော့ ခဏထွက်ပြေးကြပြီး သိပ်မကြာခင် အေးအေးဆေးဆေး မြက်စားမပျက်ကြတဲ့ မြင်းကျားတွေလိုများဖြစ်နေကြပြီလား။
သြဇီ မှာ Fellow ရပြီးသား ဆရာဝန်တောင် CPR သင်တန်း
Refresher Course ပြန်တက်ရတယ် ။
ကျွန်တော့်ကိုတောင် နောက်တစ်ခါတက်ရင် ခေါ်မယ် ပြောတာပဲ ။
ကျွန်တော် တို့လည်း CPR ကော ၊ ပါးစပ်ချင်း တေ့စရာ မလိုတဲ့ Silver Method ကော
၂ ခါ ၃ ခါ ရှိပြီ သင်ခဲ့ဘူးတာ ။ မသုံးတော့လည်း ၁ နှစ်လောက်ဆို မေ့တာပါပဲ ။
မိန်းမက ဒီတစ်ခါ သူတက်ရင် လိုက်တက်ဖို့ ခေါ်တာကိုပြောတာပါ ။
eleven Media Group စာမျက်နှာမှာ ဒေါက်တာဇော်မျိုးထက် (နှလုံးရောဂါအထူးကု၊ UK)ေ၇းထားတဲ့ ဆောင်းပါးလေးပါ … နှလုံးသားများ အကြွေမစောကြစေဖို့